Akukho okulandwayo ngemuva kokubhaliswa kwe-Jumbo
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1319 by plinux24
Amafayela engizame ukuwalayisha afakwe ohlwini lomlando wami wokulanda kodwa lawo mafayela akalokothi alandwe kwikhompyutha yami.
Angikwazi ukuxhumana nomuntu ngoba ikhasi lokuxhumana alikho. Uphi amafayela? Imali yokubhalisa yami ye-Jumbo yathathwa masinyane kodwa anginakho.
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1321 by rikoooo
Ingabe uthola umyalezo wephutha noma yini esikrinini uma uchofoza isixhumanisi ukuze uqale ukulanda?
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1324 by plinux24
Leli sayithi lithatha ngempela ukubhaliswa okukhokhelwayo. Ngisanda kuqeda ukuphendula umbuzo wakho, hit ukuhambisa futhi ngoba angizange ngibheke i-CAPTCHA yazisusa konke engabhala. Ngiyajabula ngokuthi ngibhaliswe kuphela ezinyangeni ze-3. Angiyikusebenzisa leli sayithi futhi.
Noma kunjalo, Cha, angitholi amaphutha kuphela lapho ngifika kahle ewindini lokuphepha kwenye iwindi le-pops-up elivame ukukukhetha ukukhetha indawo yokulanda. Leli festile liphela kuphela imizuzwana embalwa futhi liyanyamalala futhi akukho lutho olulandelwe.
Isiphequluli sami sisethelwe ukuthi sihlale sibuza ukuthi ungalanda kuphi futhi indawo ezenzakalelayo ifolda evamile Yokulanda.
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki - izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1325 by rikoooo
Ungakwazi yini ukuya ku-simviation.com futhi ulande okuthile, uma ukulanda kungaqali bese ungitshela, kuzongisiza ukuba ngibone inkinga yakho futhi ngikunike isixazululo.
Noma, ngingakunika imali egcwele, uma unganelisekile.
Ukuhlela kokugcina: izinyanga ezingu-10 amasonto angu-3 adlule rikoooo.
izinyanga 10 2 Sekwedlule amaviki #1336 by plinux24
Angikwazi ukungena ngemvume kuleso siteshi. Cishe sengathi angibhalisiwe. Ngisebenzise izimpawu ezifanayo engizisebenzisayo ukungena ngemvume lapha.
izinyanga 10 2 Sekwedlule amaviki #1337 by guitpik
Ingabe uhlole ifolda yakho yokulanda?
10 izinyanga 1 iviki edlule #1338 by Amberdog1
Nginenkinga efanayo ne-1st ngenkathi ngithole i-jumbo, i-a / v yami ivimbele ukulanda futhi angizange ngithole umlayezo wephutha. Khubaza i-A / V yakho bese uzama ukulanda ifayela / amafayela ozama ukukuthola.
Ithemba lokhu kusiza futhi Happy Flyin :)
Isikhathi ukudala page: 0.206 imizuzwana